६ बर्ष सँगै लिभिङ टुगेदरमा बसेको श्रीमतीलाई गर्भवती बनाएर श्रीमान फरार, रुदै न्याए माग्दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्) « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७६, शनिबार २०:२२
काठमाडौं ।हिजोआज नेपाली समाजमा पनि लिभिङ टुगेदर अर्थात् बिहे नगरी केटा र केटी सँगै बस्ने क्रम बढ्दो छ । अधिकांश कलेज पढ्ने युवायुवती लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा रमाइरहेका छन् । यो कुरा बाजेबज्यै त परै जाओस्, आमाबुवालाई सुनाउँदा पनि जिब्रो टोक्छन् । किनकि यस्तो सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले पचाउन सक्दैन । लिभिङ टुगेदर भन्नेबित्तिकै केटा र केटीले आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सँगै बस्ने भन्ने बुझिन्छ । सँगै बस्ने दुई विपरीत लिंगी र समान लिंगीबीचको फरकलाई नेपाली समाजले प्रश्नचिह्न त उठाउँछ नै ।
जानेर होस् या नजानेर हा्स्, नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । यस विषयमा पूर्ण जानकार भएरै सम्बन्धमा बस्छन् होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता समस्या जटिल बन्दै गयो भने हाम्रो समाज कहाँ जाला रु हिजोआज काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धनगढी आदि सहरमा बढी पाइन्छ । तर पनि घर, परिवार र समाजको डरले उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेको पाइन्न । अझ भनौं उनीहरू नै यो सम्बन्धबारेमा सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।
लुकेर राखिएको सम्बन्धमा पक्कै पनि केही समस्या त हुन्छ नै । त्यस्तै समस्याका बारेमा आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । ६ वर्ष एउटै कोठामा श्रीमान श्रीमती जस्तै सम्बन्ध बनाएर बसेपछि युवक वेपत्ता भएका छन् । जव युवतीलाई गर्भवती बनाएर वेपत्ता भएपछि उनी रुँदै मिडिया सामु सहयोग माग्न आएकी छन् ।
६ बर्षसम्मको लामो सम्बन्धलाई टुटाएर दुई महिने गर्भवती पवित्रा रुदै मिडियामा आएकी छिन् । आफ्नो श्रीमानले आफुलाई राम्ररी बाँच्न पनि नदिएको र श्रीमानको परिवारले पनि आफुलाई राम्रो ब्यवहार नगरेको भन्दै न्यायको लागी मिडियामा आएकि छिन् ।
यस आधारमा ‘लिभिङ टुगेदर’ के साँच्चै महिलाका सवालमा सहज छ त रु गहिरिएर सोच्ने हो भने, यस्तो सम्बन्धलाई नेपाली समाजले पनि नाजायज भन्दै आएको छ । वास्तवमा ‘लिभिङ टुगेदर’ महिलाका हितमा छैन । कानुनी रूपमा पनि धेरै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने सवालमा पश्चिमा समाजका हरेक नागरिक स्वतन्त्र छन्, शिक्षित छन् र आत्मनिर्भर छन् । लिभिङ टुगेदरपछि आउने समस्यामा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले खासै समस्या भोग्नु पर्दैन । कसैद्वारा कोही पालिनु र पाल्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
त्यसैको उदारहणका लागि यो भिडियोलाई पनि लिन सकिन्छ । लिभिगं टुगेदरका कारण यि महिलाले अहिले समस्या भोगेकी छन् । ६ वर्षसम्म संगै बसेर श्रीमान श्रीमतीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि अब उनी यो गर्भ लिएर कता जाने ? उनीमाथि कस्तो कस्तो ब्यवहार भयो त ? जान्नकोे लागी तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस् ।